Antonio Valencia oo xaalada ku sii xumeeyay tababare Jose Mourinho – Gool FM
Antonio Valencia oo xaalada ku sii xumeeyay tababare Jose Mourinho
(Manchester) 16 Nof 2018. Kabtanka kooxda Manchester United ee Antonio Valencia ayaa xaqiijiyay in sababaha uu kaga maqnaa shaxda Red Devils dhowrkii kulan ee lasoo dhaafay ay ahayd xeylad dhanka macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho ah isla markaana uusan qabin wax dhaawac ah.
33 jirkan ayaa calaamada “Like-ta” saaray bartiisa rasmiga ah ee Instagram-ka, wuxuuna sheegay inuu ku faraxsan yahay si mabda’iyan ah hadii uu Jose Mourinho ka dhaqaaqo shaqada tababarka ee kooxda Manchester United.
Si kastaba ha ahaatee Antonio Valencia ayaa raaligelin ka bixiyay ficilkan uu sameeyay, waxaana uu xaqiijiyay inuu si buuxda u taageeri doono macalinkii hore kooxaha Real Madrid iyo Chelsea.
“Waqtigan la joogo ma ciyaarayo, waxayna sababta ugu weyn ee arintan noqoneysaa inay tahay xeylad dhanka macalinka ah”.
“Ciyaaryahanka haatan ku sugan boyskeyga ee Ashley Young, si wanaagsan ayuu u ciyaaray, waana inaan ixtiraamaa go’aankan”.
“Waxa kaliya ee aan sameyn karo waa inaan si wanaagsan isku diyaariyaa, isla markaana aan diyaar u noqdaa marka uu Mourinho diyaar u noqdo adeegeyga, hadda waan deganahay waxaana ogahay inaan fursad u heli doono inaan mar kale ciyaaro”.
Neymar Jr oo ka hadlay guulaha Unai Emery ee kooxda Arsenal
Ivan Rakitic oo Seegaya Kulanka England Isagoona Ku Laabtay Barcelona